देउवाको प्रश्न: सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए के हुन्छ ? « News24 : Premium News Channel
देउवाको प्रश्न: सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए के हुन्छ ?
काठमाडौँ । वाम गठबन्धन पार्टीहरुले मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिका बारेमा कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग एकताको तयारी गरिरहँदा सरकारमा कुनै पनि कानुनी अड्चन आए के गर्ने भन्ने बिषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन व्यवसायीहरुसँग सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नु भएको थियो । कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको व्यवस्था अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने सुझाब दिएका थिए । प्रतिपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपनि विश्वासको मत राख्न सकिने कानूनविद्हरुको तर्क थियो ।
निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारलाई बिश्वासको मत राख्न कुनै समस्या नपर्ने धारणा कानुन व्यवसायीहरुको थियो । छलफलमा नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पूर्वअध्यक्ष लगायत २० जना कानुन व्यवसायीहरु सहभागी थिए ।
विगतमा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारकाविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि सरकार ढलेको थियो । तर वाम तालमेल तथा एकता घोषणा कार्यक्रममा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने गठवन्धनले सरकारलाई कुनै असर नपर्ने बताएका थिए ।